Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo dib ugu laabtay magaalada Jowhar | Jowhar Somali News Leader
Madaxweyne Waare ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho isagoo ka qeybgalay kulankii ay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo Dowlada Federalka ku yeesheen magaalada Muqdisho.
Wafdiga la socday Madaxweyne Waare ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhoweeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed,Wasiiro,xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle iyo mas’uuliyiinta maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Sh/dhexe.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay xarunta Madaxtooyada Hirshabelle ayuu Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu uga warbixiyay safarkii uu ku tegey magaalada Muqdisho, waxana uu xusay in Muqdisho uu ugaga soo qeybgalay shirkii Madaxda Dowlad goboleedyada iyo dowlada federalka,uuna la kulmay hay’adaha samafalka isla markaana mashaariicyo kala duwan laga fulin doono dhowaan dowlad goboleedka Hirshabelle.
Sidoo kale Madaxweynaha Hirshabelle ayaa ka hadlay dagaalada ay dowlada Federalka ku dhowaaqday inay la galayso ururka Al-Shabaab waxana uu si gaar ah u soo hadal qaaday dagaalka ka dhacay deegaanka Basra.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa sheegay in Maamul goboleedka Hirshabelle uu diyaar u yahay in uu ka qeybgalo dagaalada lala galayo Al-shabaab ayna taageerayaan howlgalada ay ciidamada dowlada ka wadaan deegaano ka tirsan degmada Balad.
Wararka ka imanaya xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegaya in Madaxweynaha Hirshabelle uu ku jiro la tashiyadi iugu dambeysay ee dhismaha Golaha Wasiirada iyadoo dhowaan ay xildhibaanada baarlamaanka ugu dareen muddo bil ah inuu ku soo dhiso golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle.
Previous articleGantaalo lagu riday deegaanka Mareerey ee gobolka Sh/dhexe
Next articleSomali Islamic Online oo ku soo kordhiyay fasalo cusub barashada Quraanka